အန္တာတိကကျောက်၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဆန့်ကျင်သောမဟာမိတ်ငယ်လေး ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
မော်နီကာဆန် | | ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း, သိပ္ပံ
သုတေသီများနှင့် developer များသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလေထုထဲမှကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များကိုဖမ်းယူကာမြေပြင်ပေါ်တွင်ကန့်သတ်ရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေရန်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးကြသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အခြေခံအကျဆုံး, မေ့လျော့ကြပြီ မင်းရဲ့သဘာဝကိုစောင့်ကြည့်ပါ.
ထိုအရာသည်ပုံမပေါက်သော်လည်း၎င်းသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုသန့်ရှင်းစေရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ယန္တရားများရှိသည်။ သူ၏မဆုပ်မနစ်သော 'အလုပ်သမား' များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် အန္တာတိတ် krill။ ၃.၄ စင်တီမီတာထက်မပိုသော crustacean ။
အဘယ်သူ၏သိပ္ပံနည်းကျအမည်ဖြင့်အန္တာတိက krill Euphausia superbaရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်လူသားများ၏မမျှော်လင့်သောမဟာမိတ်ဖြစ်သည်ဟု လေ့လာ သိပ္ပံဂျာနယ်တွင်“ Royal Society B ၏တရားစွဲဆိုမှုများ” တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နက်ရှိုင်းသောသမုဒ္ဒရာသို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုသယ်ဆောင်ရန်အရှိန်မြှင့်ပုံရသည်။
photosynthesis လုပ်ဆောင်သော plankton သက်ရှိများသည် phytoplankton ကိုအစာကျွေး။ ၎င်းတို့သည်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်ရေညှိများကိုဖမ်းယူရန်မျက်နှာပြင်နှင့်နီးကပ်နေပြီးအဆုံးတွင်သူတို့သည်ညအချိန်တွင်နက်နဲသောပင်လယ်ထဲသို့အကြိမ်ကြိမ်ဆင်းပြီးသူတို့၏မစင်များကိုစုဆောင်းကြသည်။ ။ ဤသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ခြင်းသည်ယူကေ၏နှစ်စဉ်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်ညီမျှသောကာဗွန်ပမာဏကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ (2015 ခုနှစ်တွင်သူတို့သည်လေထုထဲသို့ CO495,7 တန်ချိန်2သန်းထုတ်လွှတ်) ။
ပုံ - Oceanacidificaction.org.uk
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဤအပြုအမူအားရှင်းပြရန်မှာပထမဆုံးလေ့လာမှုမဟုတ်သော်လည်းသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တွင်အလားတူရလဒ်များကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ပင်လယ်ရေ၏ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်ရန်အရေးကြီးပုံကို ထပ်မံ၍ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကာဗွန်။ သို့သော် ဤဓာတ်ငွေ့သည်ရေအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုလည်းမမေ့နိုင်ပါ.
ထိုအရာကား, သမုဒ္ဒရာ၏ pH ကျဆင်းနေသည်သန္တာကျောက်တန်းများနှင့်အဏ္ဏဝါသတ္တဝါများအပါအ ၀ င်တိရစ္ဆာန်အားလုံးကိုမလွှဲမရှောင်သာသက်ရောက်စေသည်။ သင်၌အချက်အလက်များပိုရှိသည် ဒီမှာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » သိပ္ပံ » အန္တာတိကတိုက်၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောမဟာမိတ်ငယ်လေး